कोरोनाले बढायो बैंकहरूको खराब कर्जा : कर्जा नोक्सान २३ प्रतिशत बढ्यो — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > कोरोनाले बढायो बैंकहरूको खराब कर्जा : कर्जा नोक्सान २३ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । कोरोनाका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भदौ अन्त्यसम्ममा सम्भावित नोक्सान व्यवस्थाका लागि छुट्याएको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी छ ।
यो भदौसम्म कुल कर्जा ३२ खर्ब ८७ अर्ब लगानी गरेका बैंकहरूले ७९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सान व्यवस्थामा राखेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
२३ वाणिज्य बैंकले ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यवस्थामा छुट्याएका छन् । गत वर्ष भने २८ वाणिज्य बैंकले ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएका थिए ।
२३ वाणिज्य बैंकमा प्रत्येकले १ अर्बदेखि ७ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान व्यवस्था राखेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान व्यवस्था राखेको छ । सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नोक्सान व्यवस्था राखेको छ । बैंकले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राखेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेका र २०७७ असार मसान्तसम्म गएका कर्जामा समेत सोही वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो ।
त्यस्तै, असारसम्म गएको कर्जाको ब्याज २०७७ असोजसम्म असुल भएमा पनि असारकै आम्दानीमा देखाउन पाइने सुविधा दिइएको थियो ।नयाँ पत्रिकाबाट
२०७७ असोज ३० गते ०८:२४ मा प्रकाशित
हकप्रद प्रयोजनका लागि गुराँस लाइफको बुक क्लोज
फेसबुक माथि मुद्दा !
तिहारको तेस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको आराधना गरिँदै
संकटको सहारा सेयरः हाईडोको सेयरले गर्ने फाइदा पढ्नुहोस !
सेयरबाट करोडपति पुस्तक बजारमा